Sare U Qaadida | gt.io
Marnaba Maysan jirin Wax ka Wanaagsan Halkaas
Marnaba Maysan jirin
Wax ka Wanaagsan Halkaas
/ Sare U Qaadida
Gunnada Lacag dhigasho
Lacag dhigasho Waqtiga Koowaad
markii Aad KU Wareejisid MT5
Bandhig Waqti Gaaban
Gunnada Ugu badan ee Lacag dhigasho:
Lacag dhigasho Waqtiga Labaad
goortii aad KU Wareejisid MT5
Lacag dhigasho Waqti walba
goortii aad KU Wareejisid MT5 oo Dabaajiyada Aan xadidneyn
Waxaa jiro gunno aan la kor mari karin oo ugu badan oo si guud ugu dhiganto $70,000 isticmaalaha xaq u leeyahay inuu helo waqtiga noloshiisa sida macmiilka shirkada.
Gunnooyinka waxaa la bixiyaa markii aad ka soo wareejisid lacago eWallet kaaga ee ku wareejisid Koontadaada Ganacsiga MT5. Ma jiraan wax Gunno ah ee loogu tallogalay lacagaha ku shubeysid eWallet kaaga.
Gunnada waxaa lagu xisaabiyaa sida ku saleysan cadadka aad ka soo wareejisay eWallet kaaga ee ugu wareejisay Koontadaada Ganacsiga MT5, ma ahan cadadka aad ku shubtay.
Gunnada waxaa loo helayaa sida Deymaha ee Koontadaada Ganacsiga MT5.
Deyn walboo laga heli karo gunnooyinka waa laga saarayaa markii LAGA wareejinayo lacago Koontadaada Ganacsiga MT5 iyo ku celinta eWallet kaaga.
Suurtogal ma ahan inaad kala baxdid Gunnooyinka dheeraadka ah.
Haddii looga tago isticmaal la'aan, Diiwaangelinta deymaha Gunnooyinka waxay dhaceysaa 30 maalmood kadib.
Cadadka deynta Gunnada Diiwaangelinta ee lacagaha aan ka aheyn USD waxay quseysaa isbadelada lacagaha.
Waad ka laaban kartaa faa'idooyinka deymaha gunnada diiwaangelinta (Malahan Gunnada Lacag dhigasho) markii ay gaaraan qiime badan 300USD ama u dhigma. Fadlan ogow in isku day walba ee lagu wareejinayo wax ka yar faa'ido 300USD ee laga soo saaray deynta gunnada diiwaangelinta ee eWallet kaaga iyo rabitaanka kala bixitaanka cadadkaas ee bangigaaga lama ansixinayo. Way kuu, Si kastaba ha ahaatee ha noqotee, suurtogaleysaa inaad dib ugu wareejisid faa'idooyinka koontadaada si aad u sii wadid ganacsigaaga.